Maxaa ka jira in ururka Xisbullah uu ka macaasho ka ganacsiga daroogada? | Saxil News Network
Hoggaamiyaha kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay ee ah in kooxdiisu ay ku lug leedahay wax soo saarka iyo ka ganacsiga maandooriyaha amphetamine.
Sheekh Sayid Xasan Nasrallah oo saaxiib dhaw la ah maamulka madaxweynaha dalka Suuriya ayaa sheegay in aysan jirin wax lagu aamini karo eedahaasi loo soo jeediyay kooxdiisa.
Kooxdani ayaa looga shakiyay in ay ku lug leedahay ka ganacsiga maandooriyahani kaddib markii bishii Juun ee sanadkii tagay dalka Talyaaniga lagu qabtay 14 tan oo ah maandooriyaha amphetamine.
Iiraan oo dishay nin ka ganacsan jiray maandooriyaha
Jawaahir Baarqab: Waxaa jira dad maandooriye siiya gabdhaha da’da yar
Daroogadaasi ayaa ka timid dekedda Latakia ee dalka Suuriya, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta dalka Talyaaniga.
“Waxaan la xiriirnay mas’uuliyiinta dalka Talyaaniga, si aan u ogaano halka ay daroogadaasi ka timid,” ayuu yiri Xasan Nasrallah. “Eedeymahaasi ma ahan kuwo sal iyo raad leh. Taa bedelkeeda, waxay baaritaan ku hayaan kooxda la baxday Dowladda Islaamka, maafiyada Talyaaniga iyo kuwa Ruushka iyo kooxaha kale ee dambiileyaasha ahi.”
Waxa uu sheegay in ururkiisa Xisbullah lagu bartilmaameedsanayo”wararka been abuurka ah” iyo dacaayad ay ka dambeeyaan waddamada reer galbeedka.
XIGASHADA SAWIRKA,AFP/MANAR TV
Wakaaladaha dawooyinka ee waddamada Maraykanka iyo Yurub ayaa muddo dheer kooxdaasi Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan ku eedeeynayay inay ka macaashto ka ganacsiga daroogada.
Khudbad telefishanka laga sii daayay ayaa xoghayaha guud ee ururka Xisbullah waxa uu ku sheegay in “Mowqifkayaga ku aaddan daroogada, nooc kasta oo ay ahaataba, waa [mid iska cad]. Diin ahaan waa mamnuuc in la sameeyo, la iibiyo, la iibsado, la kala gudbiyo iyo in la isticmaalo. Mararka qaark, ciqaabta qofka ku hawlan arrimahaasi ayaa xitaa noqon karayso dil, sida ay qabto shareecada Islaamka. “
Waxa uu sheegay in ka ganacsiga daroogadu ay inta badan mamnuuceen culimada diinta Islaamka, “xitaa haddii qorshuhu uu ahaa in loo gudbiyo cadowga”.
Booliska Israa’iil ayaa ururkaasi Xisbullah ku eedeeyay in uu si sharci-darro ah Israa’iil ku soo geliyay maandooriyaha xashiishka. Dalka Lubnaan ayaa ka mid ah waddamada soo saara xashiishadda ugu badan adduunka. Maandooriyahani ayaa beeraha dalkaasi si caadi ah loogu abuuraa, waxaana xitaa ka mid ah deegaannada ay maamusho kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto.
Daroogada uu Talyaaniga qabtay ayaa ahayd tii ugu badneyd oo nooceeda ah oo dalkaasi lagu qabto. Ilaa 85 milyan oo ah kiniiniga nooca Captagon ayaa algu soo qariyay gudaha shixnad laga soo dejiyay dekedda Talyaaniga ee Salerno. Daroogadaasi iyo xashiish hore oo isna ka yimid dhanka dalka Suuriya ayaa la gubay bishii Diseembar.
Ciidamada la dagaalanka dambiyada dhanka dhaqaalaha ee dalka Talyaaniga ayaa horey u sheegtay in daroogadaasi oo qiimaheedu lagu qiytaasay 1.2 bilyan oo doolar ay soo farsameysay kooxda la abxday Dowladda Islaamka.
Haseyeeshee marka la eego baaxadda daroogadaasi, waxay u muuqataa in aan lagu soo farsameyn warshadaha ku yaal deegaannada ay dowladda Suuriya maamusho. Kiniinka maandooriyaha Captagon ayaa si sharci-darro ah loogu sameeyaa gudaha dalka Lubnaan.
Kaddib markii ay horraan si hubaanti la’aan ahi u shaaciyeen halka ay daroogadani ka timid ayaa mas’uuliyiinta dalkaasi Talyaaniga waxa ay diideen in ay ka hadlaan cidda ay ku tuhmayaan daroogadaasi.
Daroogadaasi ayaa la rumeysan yahay in ay ku wajahnayd dalka Liibiya oo aan loogu tala gelin qaaradda Yurub.
Dowladda Suuriya iyo kooxaha xulufada la ah ayaa lagu eedeeyay in ay ka macaashaan ka ganacsiga daroogada, waxaana arrintaasi loo aaneynayaa kala dambeyn la’aanta, dhaqaale xumida iyo xayiraadaha reer galbeedku ay ku soo rogeen dalkaasi.
Maandooriyaha Captagon ayaa ka mid ah maandooriyeyaasha ay sida aadka ahi u isticmaalaan kooxaha ka dagaallamo deegaannada ay colaaddu ka jirto. Waxaana kooxahaasi ay sheegaan in ay ka caawiso yareynta cabsida iyo walwalka xilliyada dagaalka.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa faakiheysiga, gaar ahaanna dunida Carabta. Shixnado waaweyn ayaa horraan lagu qabtay waddamada Sacuudiga, Kuweyd iyo Urdun. Dalka Masar ayaa bishii Nofeembar ee sanadkii la soo dhaafay oo keliya, waxaa muddo saddex jeer ah lagu qabtay daroogadani Captagon iyo sidoo xashiish dhammaantood ka yimid dalka Suuriya